लेखन शिक्षक रिजुम लागि आधारभूत नियमहरू
काम को खोज - एउटा महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार काम छ। आफ्नो नाटकहरु सही रिजुम लेखिएको को सफल पूरा नभएको कम्तिमा भूमिका। कागजातको मस्यौदा - एक laborious प्रक्रिया, यो ध्यान र एकाग्रता आवश्यक छ। CV के तिनीहरूले ईन्जिनियरहरु, डाक्टर, प्रबन्धकहरूले लेख्न बाट पनि फरक छैन। तर, यो यसको आफ्नै peculiarities छ।
पहिलो स्थानमा के हेर्न
कागजात मा काम सुरु गर्नु अघि आवेदक आफैलाई केही प्रश्न सोध्नु पर्छ:
1 उहाँले काम को लागि किन देख छ?
2. यो उपयुक्त छ स्थिति के छ?
3. यस शैक्षिक संस्थाले आफ्नो सहयोग आकर्षित के?
त्यसपछि मात्र तपाईं पछि शिक्षकको रिजुम मा प्रदर्शन गरिने जानकारी को चयन गर्न अगाडि बढ्न सक्छ।
विशेष ध्यान कागजात साक्षरता को तयारी भुक्तान गर्नुपर्छ। पेशा शिक्षण मूल भाषा को ज्ञान को एक उच्च स्तर आवश्यक छ। हिज्जे र विराम गल्ती अनिवार्य शैक्षिक संस्था को टाउको को निर्णय प्रभावित हुनेछ।
मात्र ती तथ्य को आवेदक गरेको योग्यता देखाउन सक्षम छन् कि प्राथमिकता दिन आवश्यक सामाग्री को चयन को चरण मा। सोख - यो जानकारी निर्मूल गर्न सकिन्छ। को कर्मचारी यो आवश्यक हुनेछ भने, त्यो साक्षात्कार मा सान्दर्भिक प्रश्न सोध्न हुनेछ।
तपाईंको आफ्नै रिजुम संरचना सोच्न कुनै समय वा इच्छा छ भने, तपाईं नमूनाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै विशेष वेबसाइट आफ्नो प्रयोगकर्ता टेम्प्लेट प्रस्ताव।
त्यसैले, के शिक्षक एक रिजुम हुनुपर्छ? यो कागजात को एक नमूना निम्न विवरणहरू समावेश गर्न निमित्त:
को आवेदक बारेमा 1 मूल डाटा। यी पूर्ण नाम, जन्म मिति, संचार को विधिहरू समावेश गर्नुहोस्।
शिक्षा मा2सूचना। यो खण्ड मार्फत हेर्दै, को कर्मचारी सिक्न सक्नेछन्:
विशेष माध्यमिक, उच्च शिक्षा;: - शिक्षा कस्तो प्रकारको गर्ने आवेदक प्राप्त
- कुनै पनि शैक्षिक संस्था उहाँले स्नातक;
- थियो जब अन्तिम समय योग्यता उठायो।
पाठ्यक्रम को सूची जब तपाईं आफ्नो कार्यान्वयन, घण्टा र विषय को संख्या को मिति र स्थान संकेत हुनुपर्छ।
3. अनुभव। यो खण्ड रिजुमेहरू अधिकांश समर्पित गर्नुपर्छ। शैक्षिक संस्था, स्थिति, समय, काम को नाम - यी क्षेत्रहरू अनिवार्य छन्। यो जानकारी कालानुक्रमिक क्रम मा प्रस्तुत गरिनेछ यदि यो राम्रो हुनेछ। यस खण्डमा तपाईं प्राप्त कौशल को एक संक्षिप्त विवरण दिन सक्छन्।
शिक्षक र आफ्नो विद्यार्थीहरूको4उपलब्धीहरू - शिक्षक सारांश एउटा महत्त्वपूर्ण भाग। यी जो लागि कर्मचारी ध्यान गर्न आवश्यक छ शिक्षकको काम, को मुख्य सूचकहरू छन् - उहाँले सहभागीहरू, को विजेता र विद्यालय Olympiads र वैज्ञानिक सम्मेलन, परीक्षा परिणाम विजेता को संख्या मा भाग शिक्षक, साथै डाटा लिए जो व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिताहरु हस्तान्तरण।
को आवेदक बारेमा थप जानकारी
अक्सर तपाईं आवेदक र मनोवृत्ति को व्यक्तिगत गुणहरू मा सारांश डाटा मा पाउन सक्नुहुन्छ। तथापि, विशेषज्ञहरु केही हाकिमहरूले यो अनावश्यक deem सक्छ देखि, यो जानकारी सारांश मा समावेश नगर्न सल्लाह।
को आवेदक सारांश पूर्ण गर्न आफ्नो व्यक्तित्व झल्काउने गर्दैन देखिन्छ भने, यो उपलब्ध अतिरिक्त कौशल मा कागजात डाटा समावेश गर्न सकिन्छ। यी विदेशी भाषाहरूको ज्ञान र व्यक्तिगत कम्प्युटर, व्यक्तिगत कार भइरहेको र अनुभव ड्राइभिङ समावेश गर्नुहोस्। कुनै पनि कर्मचारी तिर्न हुनेछ यो ध्यान।
निजी फोटो: संलग्न वा
सायद यो प्रश्न सबैभन्दा कठिन छ। केही मानिसहरू रिजुम फोटो साथ दिनु रुचि हो, कसैले गर्दैन। विशेषज्ञहरु कर्मियों विभाग वा यदि आवश्यक फोटो सचिवलाई स्पष्ट गर्न रिजुम पठाउनु अघि सल्लाह। मा जवाफ को रसिद यसलाई क्रमशः छवि को चयन दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण छ। फोटो शिक्षक समुद्र तट वा रात पट्टी बनेको फेरि सुरु गर्न संलग्न, यो आवश्यक छैन, यो पेशामा सार्वजनिक छ र बच्चाहरु संग काम गर्न शामिल किनभने छ।
माथिको रिजुम लेखन को आधारभूत नियमहरू छन्। शिक्षक काम मा नमूना इच्छित यदि पाउन सकिन्छ। तर, यो स्पष्ट संरचना, ascetic डिजाइन, एउटा सानो आवाजमा धनी सामग्री, सामग्रीको राम्रो प्रस्तुति प्रमाणित कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ - कि गुणस्तर रिजुम एक नुस्खा छ।
साक्षात्कार मा व्यवहार कसरी सात सुझाव
पुनरुत्थानमा कार्यहरू र उपलब्धिहरू। CV मा "उपलब्धिहरू" स्तम्भमा कसरी भर्न सकिन्छ
नमूना रिजुम संचालन व्यवस्थापन। एक रिजुम कसरी लेख्न?
एक रिजुम कसरी लेख्न, कार्यरत गर्न
यस संकलनको लागि सिफारिसहरू को सारांश मा थप जानकारी कस्तो हुनुपर्छ
इगोर - एक स्की रिसोर्ट। सेन्ट पीटर्सबर्ग इगोर मा स्की रिसोर्ट्स
आफ्नो हातले पोस्टकार्ड-शर्ट: चरण निर्देशनहरूको द्वारा कदम। पोस्टकार्ड-शर्ट: एक मास्टर वर्ग
यो उपयोगिता बिल मा ऋण संग घर निजीकरण गर्न सम्भव छ?
Myotonic सिंड्रोम: कारण, लक्षण, उपचार
कसरी सोमालिन रेशम पकाउन यसलाई मनपर्ने डिशमा बदल्न
रेलवे मा एक घर किन्न। र एक विशेषज्ञ वा बिना मद्दत संग?
को Rostov परिवार। "युद्ध र शान्ति" एल एन टोलस्टोय: परिवार विशेषताहरु Natashi Rostovoy
Shoelaces बाँध कसरी छिटो। केही असामान्य तरिका
शीतलन प्रशंसक VAZ-2110 काम गरिरहेको छैन। योजना पालो प्रशंसक ठंडा
माछा मार्ने को रहस्य: boilies मा आक्षेप पक्रने